Novena ee gunooyinka Kirismaska, midowga qoyska | Safarka Absolut
La Strenna Novena Waa mid ka mid ah Dhaqanka Christmas ugu muhiimsan uguna qoto dheer Colombia. Sidoo kale waxay caan ku tahay wadamada kale ee Koonfurta Ameerika, sida Venezuela ama Ecuador. Muhiimaddiisu waxay ka gudubtaa oo keliya ifafaale diimeed, oo noqota ficil bulsheed iyo caado loogu talagalay midowga qoysaska.
Inta lagu gudajiro Advent, muddo sagaal maalmood ah (laga bilaabo Diseembar 16 illaa 24, oo loo dhan yahay), qoysaska ka kala yimid daafaha dalka ayaa isu yimaada si wada jir ah u tukada una heesaan heesta kirismaska. Barta kulanku had iyo jeer waa Muuqaalka Dhalashada ama Muuqaalka Dhalashada, oo ku yaal meel dhexe oo guriga ah. Ereyga "sagaalaad" wuxuu si sax ah uga yimid sagaalkaas maalmood. Hordhac shucuur leh u ah ciida kirismaska
1 Asalka Aguinaldos novena
2 Ducada Novena
Asalka Aguinaldos novena
Dhaqankan quruxda badan ee Kaatooliga wuxuu ku dhashay dhulalka Mareykanka, xilliyadii gumeysiga. Xaqiiqdii waxay ahayd Fray Fernando de Jesús Larrea, oo ah Franciscan diin ku dhashay Quito, oo bilaabi lahaa dhaqankan. Dhammaantood waxay bilaabeen 1725, ka dib markii loo caleemo saaray wadaad ahaan. Fikradda ah tukashada ku xigta dhalashada Ilmaha Ciise intii lagu jiray sagaalkii maalmood ee ka horreeyay Kirismaska ​​ayaa soo dhaweyn weyn ka dhex yeeshay dadka cibaadaysanaya.
Si kastaba ha noqotee, sida ay qoysaska maanta ugu dabaal dagaan Aguinaldos Novena ee dalka Kolombiya waxaa sabab u ah wax ka beddelka ay sameeyeen hooyo Maria Ignacia, dhammaadkii qarnigii XIX. Iyadu waa tii iyadu bixisay ducooyinkan qaab jaangooyooyin ah, sidoo kale ku darista farxadaha, taas oo ah waxa loo yaqaan heesaha dhex-gala salaadda iyo salaadda.
Hase yeeshe, hal nooc oo ka mid ah 'Novena de Aguinaldos' oo ka badbaaday illaa maantadan, laakiin dhowr ah. Qaarkood waxaa lagu akhriyaa Isbaanishkii hore, xoogaa duug ah oo ka fog xasaasiyadda xilligan, iyadoo la adeegsanayo tusaale qaab "vos" xushmad leh Qaar kale, si kastaba ha noqotee, waa la beddelay si loo cusbooneysiiyo xukunka luqadda casriga ah.
Tani waa fiican tahay video macnaha salaadda Novena de Aguinaldos ee bulshada reer Kolombiya aad baa loo soo koobay:
Sida aad u aragto, dadka reer Colombia Novena de Aguinaldos maahan oo kaliya dhaqan diimeed, laakiin sidoo kale waa sabab loo xoojiyo xiriirka ka dhexeeya asxaabta iyo qoyska. Ku Caloosha kirismaska iyo muusikada sidoo kale ma seegi ballantan.
In kasta oo ay tahay mid taxaddar la'aan leh iyo dabeecad caan ah, Novena de Aguinaldos Waa xaflad la raacayo tilmaamaha iyo xeerarka si fiican loo qeexay. Had iyo jeer waxay bilaabataa 16-ka Diseembar waxayna dhammaataa habeenka Kirismaska. Guryaha qaar salaaddu waxay dhacdaa ka hor casho, halka guryo kalena laga tago goor dambe.
Novena ee Strenna waxaa loogu dabaaldegaa qoys ahaan
Fikradda ka dambaysa dhaqankan ayaa ah xusuusta bilooyin ka hor dhalashadii Ciise, muddadaas oo ku dhammaanaysa dhalashadiisii ​​Beytlaxam. Hooyo María Ignacia, oo qaabaysay habka loo tukado novenas, ayaa aasaastay sida loo xukumo sida soo socota:
Marka hore Ducada maalin kasta, oo si daacad ah u raacaya qoraalka asalka ah ee Fray Fernando de Jesús Larrea. Akhrintaan kadib, waxaa "Ammaan Aabbaha".
Waxaa la raacayaa goor dambe oo leh tixgelinta maalinta. Mid baa jira mid kasta oo ka mid ah sagaalka maalmood.
La ducadii bikradda barakaysan ayaa ku xigta, oo ay ku xigto salaadda sagaal Hail Marys (mid ka mid ah novenasyada).
Markaas waa markiisa ah salaadda Saint Joseph, oo waliba maalin walba la akhriyo. Akhrisku wuxuu ku egyahay seddex salaadood: "Aabaheena", "Hail Maryan" iyo "Ammaanu Aabbaha."
ka Farxad ama Himilooyin ku saabsan imaatinka Ilmaha Ciise ka samee qaybta muusikada ugu nool ugunafiican novena. Cod ayaa akhrinaya heesaha, kuwaas oo inta badan ay ka jawaabaan koox koox koox ah.
Tan ka dib ayaa timaadda tukashada ilmaha Ciise, taas oo qaab ahaan ah qaybta ugu muhiimsan ee sagaalaad. Ka dib iyada, kaqeybgalayaashu waxay fursad u siinayaan inay dejiyaan codsiyadooda ilma Ciise, guud ahaan waxay u rajeeyaan caafimaad iyo barwaaqo guriga iyo qoyska.
Kii sagaalaad wuxuu ku soo gabagabeynayaa jumladaha ugu dambeeya, kaas oo had iyo jeer u muuqda Aabbahayaga iyo ammaanta Aabbaha.
Salaadahan iyo heesahan waa in la dhaho mid kasta oo ka mid ah sagaalka maalmood. Tusaale ahaan waxa kor lagu sharaxay, kani waa qoraalka asalka ah ee Fray Fernando de Jesús Larrea oo midkasta oo kalfadhiyada Novena de Aguinaldos ahi bilaabmayo:
«Ilaaha ugu fiican ee samafalka ah ee aan dhammaadka lahayn, oo aad u jeclaa ragga, oo aad wiilkaaga ka siisay ballanqaadkii ugu fiicnaa ee jacaylkaaga, oo ka dhigay nin uurjiif ah Bikro, wuxuu ku dhalan doonaa qabaal caafimaadkeenna iyo dawadeena . Aniga, aniga oo ku hadlaya magaca dadka oo dhan, waxaan kuugu mahadcelinayaa mahad aan dhammaanayn oo ah faa'iidadaas gobannimo ee noocan ah; adigana isaga waxaan kuugu deeqayaa saboolnimada, is-hoosaysiinta iyo wanaagga kale ee wiilkaaga dadnimo leh, anigoo kaa baryaya wanaaggiisa rabbaaniga ah, raaxo-darrada uu ku dhashay, iyo ilmada jilicsan ee uu ku daadiyay qabaalkiisa, inaad quluubteenna ku tuur is-hoosaysiin qoto-dheer, jacayl kulul, oo quudhsan dhammaan waxyaalaha dhulka jooga, si Ciisaha dhasha ahi ugu jiro daboolkiisa dhexdiisa, oo weligiis u joogo. Aamiin ".
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Gunnada kirismaska ​​novena, midowga qoyska